Ukubukeka nokuhlala ezimakethe ezilodwa - ngokuchofoza okukodwa ngenhlanhla?
Ukuhwebelana Okungashadile - Ukuchofoza okukodwa kuya enjabulweni | ubambiswano
Ukubonakala kwakhe nokuhweba ezimakethe ezilodwa
Ngihamba kanjani ngokulungile?
Inombolo yezilinganiso ziphakeme namhlanje kunanini ngaphambili. Omunye unokudumazeka okudabukisayo ngemuva kwalokho, mhlawumbe omunye umangalelwa kakhulu. Abaningi nabo bangabodwa bengenasisekelo noma nje kunzima ukuhlangana nomunye umuntu. Izilinganiso eziningi futhi zizama izindlela zanamuhla zokuxhumana nge-intanethi. Izingosi zokuphola ku-intanethi zithandwa kakhulu kunanini ngaphambili.
Ngaphambili okokuqala ukucinga "ingxenye yakhe yesibili" kuye kwaba nzima kakhulu futhi empilweni yangempela ivinjelwe endaweni yomsebenzi noma kumbuthano wabangani, ngenxa ye-intanethi, kunamathuba amaningi namuhla. Ngisho nensizwa eyisethulo, kodwa eyinhlanhla isivele isithole i-Dulcinea yayo - ikakhulukazi.
Funda ukudlala ngothando
I-clientel 55 + futhi ngokujwayelekile kubantu abanamahloni noma abamatasa njengabaphathi nabaziqashile, abangenayo isikhathi esincane noma abafisa ukuphuma, bavule izimakethe ezintsha zokudoba bethembisa amathuba amasha. Yikuphi okwesabekayo ubudala oneminyaka eyi-60 ekhuluma nowesifazane osesendlini yekhofi namhlanje? Ngenxa ye-intanethi, ngisho ne-reverse kungenzeka. Sekuyisikhathi eside manje, owesifazane akasadingeki alinde, kodwa uvumelekile ukuthatha isinyathelo ngokwakhe.
Ekuphileni kwangempela, amathuba okuthi umhlengikazi, isibonelo, uhlangana futhi uthanda umuntu ofundiswa kahle, kodwa ongenakuqhathaniswa nomthengisi onenzuzo efanayo yamasiko, cishe ufana ne-zero. I-inthanethi yenza kwenzeke!
Njengoba kunzima njengoba kusetshenziselwa umlingani oqondile ukuthi ube ngaphandle kwe-intanethi, ngeshwa futhi kulula namhlanje ukuba uphuthuke ngamaphrofayli angamanye futhi ukudumaze ama-singles angamaqiniso.
Amadoda athile avame ukudibanisa amasayithi okuthandana ngekhalenda ye-mail oda futhi bacabanga ukuthi kufanele "ayala" owesifazane kuphela. Amaphrofayili okuqukethwe kanye nezidingo ezihloswe ngamabomu ngobusuku obulodwa, ubuhlobo bobulili nokungathembeki kuyaqhubeka. Kusukela namuhla cishe wonke umuntu enokufinyelela kwe-intanethi, izinga lamaphrofayli ligoba, abanye besifazane abangashadile abahluphekayo bathi. Ngisho nokuhwebelana okungqingili, okumele ukhokhele ukusetshenziswa kwezinsizakalo, izinga lokugoba kanye nenani lalabo ababhalisa ngokungaziwa ngaphandle kwesithombe, likhuphuke kakhulu.
Ukubhaliswa okuningi kanye namaphrofayela amnandi kanye namaphrofayli angathí sina okuqukethwe kwawo okufana nokuthi: "Angikufunanga lutho. Ngivele ngibheke nxazonke "zifana neze. Ngaphandle kwalokho, naphezu kwamazinga awela kanye nama-fake amaningi, inani loxhumana nabo nokukwazi ukwazi izinhlamvu eziningi ezihlukile mhlawumbe eziphakeme kakhulu lapha. Umuntu othembekile obuka njalo ubuka iminwe lapha.
Ukubekezela, kodwa kungathatha isikhashana ngamasayithi okuphola!
Abashayeli bavame ukugqotshwa ngezinhlamvu nokuvakashelwa kwekhasi. Umbhangqwana ungazitholela kuphela ebangeni eliyinkulungwane ngokuchofoza okumbalwa nje kuphela ukuze kube nobuhlobo obuhlala njalo, lokhu cishe okudumile kakhulu ekubuseni.
Ama-36- kuya ku-45 oneminyaka engu-100 ubudala ayilona iqembu elidala elibucayi empilweni yangempela. Ngaphandle kwakho konke, abalingani abangase bakwazi ukuhlanganisa imindeni ethembekile futhi banikeze noma bangakakulungeli okwesibini.
Yini okufanele uyenze lapho umngane wakho omkhulu eba uthando?
Ukuze uthole usesho olujulile kufanele ucacise ngemibono yakho kanye nezifiso zakho. Noma kunjalo, umuntu kufanele alindele ukuxhumana nabantu abangakaqedanga indaba yabo endala. Ngokushesha umuntu oyedwa uba ngokungazi "i-stopgaper".
Izimakethe eziyingqayizivele kwi-intanethi
Ngaphezu kwalokho, umuntu kufanele alungiselele ukuthi okuthiwa i-Adonis ngosuku lokuqala nesithombe esithombeni sakhe sinokufana okuncane.
Noma kunjalo, naphezu kokungaziwa, umuntu kufanele aphathe njalo ngesithunzi nangenhlonipho.
Ukukhohliswa kakhulu kunesisindo nakakhulu. Ngaphezu kwalokho, amadoda anenkinga yokuvuma izinwele zabo ezinciphayo. Abesifazane nabo bathanda ukukopela nge-kilos zabo. Ngakho-ke kwenzeka kaningi ukuthi akuyiqiniso, ngokuvamile sekuvele izithombe ze-10 ezindala.
Ukukhungatheka ngosuku lokuqala kungenakugwema.
Ukuphila akuyona ikonsathi yokucela, ayikho ngempela noma kuyi-intanethi. Uma umuntu ekwazi lokhu futhi esebenzisa indlela enhle yengxoxo, ukushintshaniswa nokwazi omunye nomunye ukuthi ngabe ubuningi bezingoma ezilinganisweni ezithengiswaneni zamasheya kanye namathuba abo, akukho lutho endleleni yenjabulo engenakwenzeka futhi, ngaphezu kwakho konke, ukutholakala komuntu siqu.
Mhlawumbe kufanele ube nesineke ngaphezulu.
Yiba umzali - hlala umbhangqwana onothando | ubambiswano
Ukuthumela imiyalezo nge-SMS - isimo esiyingozi | Ezocansi ...
Ukuphuza empilweni yansuku zonke kuyisimo?
Kuyini ezombangazwe - Kungani ukhetha owodwa ...
Indoda encane imile ehlathini - amanothi kanye nombhalo
Inyoni yayifuna ukwenza umshado - amanothi nombhalo
Emthini i-cuckoo sat - amanothi kanye nombhalo
Iyini inkondlo | Izincwadi zokufunda izincwadi
Indaba emfushane yezingane - Isilwane njenge-...
Ukuvuselela - ukuvuselela indlu endala
Wedding - Yileyo ndlela umkhosi womshado uba ngayo impumelelo
Umdwebo we-Nude Isinyathelo ngesinyathelo esichazwe
Imidwebo yobuhle yobuhle besifazane
Ikhasi le-Coloring Men and Couples
Amashidi okuzivocavoca Ucansi
Ukugula ebusika - ngani?